Burburka Tacliintu, Waa Burburka Ummada!
Mid ka mid ah, macallimiinta dhiga Jaamacadda dalka Koonfur Afrika ayaa ardaydiisa oo ka koobnayd heerarka aqoonta ee kala duwan ( Degree, Master iyo PHD) u qorey warqad uu kaga warramayo xaaladda kulliyadda uu dhigo ee jaamacadda Koonfur Afrika.
Professorka ayaa kelmadahan ku qoray warqadiisa: ” Burburka ummaduhu uma baahna atoomik bam ( Nuyukliyer) iyo ganataalaha riddada dheer oo lagu baabiiyo.
Laakiin ogow waxa lagu baabiin karaa in hoos-u-dhac lagu sameeyo tayada waxbarasho iyo manhajka dalka, ardaydana loo ogolaado in imtixaanka ay qishaan.
Arinkaasi ayaa suuro-gelinaya in qofkii bukey ku hoos dhinto dhakhtar ku soo baasey Qish, dhismaha guryuhuna ku dumaan Engineer aqoon lahayn oo ku soo baasey Qish, hantiduna ku lunto xisaabiye, ku soo baasey Qish.
Ixtiraamka Aadminimona ku hoos dhinto wadaad ku soo gudbay aqoon diin ahaaneed oo Qish ah, caddaaladduna ku dayacanto garsoore isna aqoon sharci aan lahayn, balse ku soo gudbay Qish. Intaasi marka ay dhacdo waxa Jahligu ku fidiyaa Caqliyada dhallinyarada, kaas oo uu uu gaadhsiinayo macallin isaga lafterkiisuna ku soo gudbay Qish”. Burburka tacliintu waa Burburka ummadda. (Jamiiforums.Com)